မဟာစည်သြ၀ါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဇဋိလ (သာသနဓဇ သိရီပ၀ရ ဓမ္မစရိယ၊ ၀ိနယပါဠိပါရဂူ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ) (Phd.) ၏ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ သာသနာပြုခရီး။ ...(၅) | Mahasi Sasana Yeik Tha
မဟာစည်သြ၀ါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဇဋိလ (သာသနဓဇ သိရီပ၀ရ ဓမ္မစရိယ၊ ၀ိနယပါဠိပါရဂူ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ) (Phd.) ၏ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ သာသနာပြုခရီး။ ...(၅)
Submitted by im_admin on Mon, 01/04/2016 - 14:16
Virginia "Catudisa Sangha Vihara" ကျောင်းတွင် ယောဂီများနှင့်အတူ
(၃-၆-၂၀၁၅) နေ့တွင် Virginia မှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် Bikkhu Pasado က ဆရာတော်အား ကားဖြင့် လာရောက်ပင့်ဆောင်ကြပြီး အရုဏ်ဆွမ်းကိုလည်း New York မြို့ရှိ ဒေါက်တာနိုင်သူလင်း နေအိမ်တွင် ဘုဉ်းပေးပြီး နံနက်(၈)နာရီတွင် ကားဖြင့်ဆက်လက်ထွက်ခဲ့ကြရာ (၁၀း၃၀)နာရီတွင် Philadelphia မြို့ရှိ သီရိရတနာ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ရောက်ရှိကြပါသည်။ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် အရှင်စက္ကိန္ဒက ဆရာတော်အား နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်ပြီးနောက် Philadelphia မှ ခရီးဆက်ခဲ့ကြရာ Virginia ပြည်နယ် Bealeton မြို့ရှိ Catudisa Sangha Vihara ကျောင်းသို့ ညနေ (၄)နာရီတွင် ရောက်ရှိကြပါသည်။ ၎င်းကျောင်းတွင် (၆-၆-၂၀၁၅) နေ့မှ (၁၂-၆-၂၀၁၅) နေ့ထိ တရားစခန်းပြုလုပ်ကြမည်ဖြစ်ရာ ယောဂီများ၊ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ တဖွဲဖွဲရောက်ရှိ လာကြပါသည်။
Virginia ရှိ Vietnamese ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ယောဂီအယောက် (၂၀)ကျော်မျှ ရောက်ရှိနေကြပြီး ဆရာတော်မှ ယောဂီများအား (၆-၆-၂၀၁၅) ရက်နေ့ နံနက် (၄)နာရီမှစတင်ပြီး တရားဟောခြင်း တရားပြခြင်း၊ တရားစစ်ဆေးတို့ကို နေ့စဉ်မနားမနေပြုလုပ်ခဲ့ရာ (၁၂-၆-၂၀၁၅) နေ့ည (၉)နာရီတွင် တရား စခန်းသိမ်းပါသည်။